२०. काम नभए झिंगा मार्नू - Harish Bk
Home/ Article/२०. काम नभए झिंगा मार्नू
Harish BK November 12, 2017
विश्व–विख्यात ककेसियन दार्शनिक इभानोबिच गुर्डजिफको प्रंसग । उनी खासै काम नभएको दिन प¥यो कि आफ्ना शिष्यहरूलाई कतै जगंलतिर लान्थे । उनीहरूलाई ठाउँ–ठाउँमा खाल्डो खन्न आदेश दिन्थे । जब गहिरो खाल्डो तयार हुन्छ उनका शिष्यहरू सोध्थ,े गुरुदेब, खाल्डो त गहिरै खनियो, अब के गरुँ ? गुर्डजिफ सहज जबाफ दिन्थे, अब यसलाई बिस्तारै पुर्नू ।
बिस्तारै पुर्र्नू रे ? पुर्ने नै भए किन खन्नु प¥यो र , त्यत्रो मिहेनत गरेर ? शिष्यहरूले सोध्थे । बाबुहरू हो ! त्यतिकै समय खेर फाल्दा तिमिहरू अल्छि हुन्छौ । तिमिहरूका दिमाग सुस्त हुन थाल्छ र शरीर कमजोर । त्यसकारण केही न केही गरी आफूलाई व्यस्त राख्नु नै जीवनको बाटो हो । कसो ? गुर्डजिफ भन्थे ।
प्रायः महा पुरुषले यस्ता कुरालाई सानै उमेरमा ठम्याइसकेका हुन्छन् र यस्ता कुरा उनिहरूको जीवन–दर्शन भइदिन्छ । यसै कुरासँग मिल्ने कुरा छ– जर्ज वर्नड शाको । उनले उद्घोष गरेका छन् – यदि केही काम पाइएन भने झिंगा मारेर भए पनि आफूलाई व्यस्त राख्नू ।
शाले यो कुरा अरूको लागि भनेका हैनन् बरु आफै बाँच्ने शैलीसमेत बनाएका हुन् र त उनी पनि महानताको शिखर छुन सफल भए । सु रुका दिनमा उनी असफल लेखक थिए । उनले ठम्याए कि आफ्नो मिहेनतले पुगेन । त्यसपछि उनले जस्तो सुकै होस् दैनिक पाँच पृष्ठ लेख्ने अभ्यास गरे । नौ–नौ वर्ष लगातार आफूलाई लेख्नमा व्यस्त राखे, परिणाम– साहित्यमा नोबेल पुरस्कार थाप्न सफल भए ।
जवाहर लाल नेहरुले पनि आफूलाई पथ प्रदर्शन गर्ने खालका नारा अगाडि सार्दैै भने– आराम हराम है । यिनै दार्शनिक चिन्तनबाट स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधान मन्त्रीको जन्म भएको मान्न सकिन्छ ।